चीनको आर्थिक वृद्धि सन् २००९ पछिकै कम, अमेरिकासँग व्यापार युद्धको असर ? « GDP Nepal
चीनको आर्थिक वृद्धि सन् २००९ पछिकै कम, अमेरिकासँग व्यापार युद्धको असर ?
Published On : 21 October, 2018 6:35 am
काठमाडौं । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन यतिबेला संसारकै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग व्यापारिक युद्धमा छ । अमेरिका र चीन दुवै देशले एक अर्का मुलुकमा आयात हुने वस्तुको भन्सार दर बढाइसकेका छन् ।
व्यापार युद्धको प्रभाव अमेरिकामा कत्तिको परिरहेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छैन तर चीन भने यसबाट नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको देखिन्छ ।
चिनियाँ समाचार स्रोतहरुका अनुसार चीनको आर्थिक वृद्धि पछिल्लो एक दशकयताकै कम छ । चीनको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार जुलाइदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्मको आर्थिक वृद्धि दर ६.५ प्रतिशत मात्रै छ । यो वृद्धिदर नेपालकै हाराहारी हो ।
केही वर्षअघिसम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर छिमेकी चीन र भारतको जस्तै दोहोरो अंकको हाराहारीमा हुनुपर्छ भन्ने गरिए पनि ति मुलुकको वृद्धिदरमा दिगोपना नरहेको यसले देखाएको छ ।
हुन त नेपालको अर्थतन्त्रको आकार निकै सानो भएकाले थोरै परिश्रमले पनि धेरै वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ भने ठूला अर्थतन्त्रमा सामान्य वृद्धिका लागि पनि ठूलै परिश्रम गर्नुपर्छ ।
हाल अमेरिकी र चिनियाँ सरकारले एकअर्काको देशबाट आयात गरिने सामानमा भन्सार शुल्क बढाइदिएका छन् । अमेरिकाले स्टील र एलुमिनियममा आयात शुल्क बढाएर सुरु गरेको व्यापार युद्ध निकै अघि बढिसकेको छ भने चीनले पनि यस्तै निर्णय गरिसकेको छ ।
हालैमात्र चीनले उसको पहिलो त्रैमासिक आर्थिक वृद्धिदर विश्वव्यापी आर्थिक संकट यताकै सबैभन्दा सुस्त भएको स्वीकारेको छ । बीबीसीका अनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा खस्किँदै गएको अर्थव्यवस्थालाई सुधार्न नीतिनिर्माताहरू लागि परेका छन् ।
ठूलो मात्राको ऋण र अमेरिकासँगको तीव्र व्यापार युद्ध लगायतका कारण चीनले उच्च आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ । अमेरिकासँगको व्यापार विवादको असर आगामी महिनाको आर्थिक वृद्धि दरमा पर्नसक्ने ठानिएको बीबीसीले पनि लेखेको छ ।
चीनको पछिल्लो वृद्धिदरको तथ्यांक सन् २००९ यताको सबैभन्दा सुस्त आर्थिक वृद्धि हो । चीनको पछिल्लो अवस्थाले चीन अर्थव्यवस्थाको प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा रहेको र अमेरिकासँग व्यापार युद्ध लड्ने मनस्थितिमा नरहेको बताइएको छ ।